आधा जीवन एक सामाजिक मीडिया माल्दाउन | Martech Zone
जब म स्यान डिएगो मा बोलें सामाजिक मिडिया ट्रोलहरू, सris्कट र ब्लन्डरहरू, सम्पूर्ण भाषणको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष अनावश्यक डर हो जुन सामाजिक मिडिया मार्फत स्थायी हुन्छ जब पनि एक कम्पनी माथि जान्छ।
एक सोशल मिडिया मल्दाटाउनको आधा जीवन सीधा सम्बन्धित छ कि अर्को कम्पनी कत्तिको चाँडो स्लिप हुन्छ।
र यो अब हरेक केहि मिनेटहरूमा भइरहेको छ। यस हप्ता सबै बज छ Amy बेकिंग कम्पनी मा पोस्ट Scottsdale, Az। अब ... तपाईं जानु पहिले र पढ्न कि पोष्ट गर्नुहोस्, मात्र पढ्नुहोस् यो अघि बढ्नु अघि पोस्ट गर्नुहोस्।
म भाग्यशाली थिए (वा पर्याप्त अशुभ) को टेक पक्षमा काम गर्नका लागि रेस्टुरेन्ट उद्योग केहि वर्ष पहिला। मार्जिन कडा थियो, कर्मचारीको कारोबार हास्यास्पद थियो, ग्राहकहरू असभ्य थिए, र पुन: व्यवसायीमाथि घण्टा र दबाबहरू निन्दाभन्दा परको थियो। म कहिल्यै आफ्नो खाद्य सम्बन्धित कम्पनी खोल्न सक्दिन ... सँधै। मसँग आज उद्योगमा साथीहरू छन् र यो वास्तवमै एक व्यवसाय हो जुन तपाईंले प्रेम गर्नु हुन्छ किनभने त्यहाँ अन्य धेरै फाइदाहरू छैनन्।
त्यसोभए, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले अन्ततः तपाईंको सपना सुरु गर्नुभयो र तपाईंको बिस्ट्रो बनाउनुभयो। अब कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो रेष्टुरेन्टलाई जोगाउन संघर्ष गरिरहनु भएको छ र रियलिटी टेलिभिजन कार्यक्रमको माध्यमबाट जनताको ध्यान खिच्ने मौका आयो।
सम्भवतः गलत हुन सक्छ?
ठिक छ ... किनकि रियलिटी टेलिभिजन कार्यक्रम आफैंमा बहु मिलियन डलर उद्यम हो, त्यहाँ केहि थोरै छ। गोर्डन रम्सेको काम एक रेस्टुरेन्ट लिन र यो शो मा राम्रो-ट्यून छैन। दर्शकहरु उनी दुबै रूख र अहंकारी छ भन्ने तथ्यलाई बुझेका छन् ... त्यो मनोरन्जन हो। र शो को उद्देश्य रेस्टुराँलाई सबैभन्दा खराब प्रकाशमा चित्रित गर्नु सुनिश्चित गर्नु हो ताकि श्री राम्से एक च्याम्पियन जस्तो टाढा हिँड्न सकून्।
यो भनिन्छ भान्सा नाइटइजमान्छेहरू। र हिम्मत गर्छु म भन्दछु कि उनीहरूले प्रस्फुटन प्रेम गरिरहेछन् ... उनीहरूको गृह पृष्ठमा एपिसोडको भिडियो छ।
त्यो श्री रामसेको पूर्ण आलोचना होइन। म कार्यक्रम देख्छु र, जब उसले यसलाई न nails्ग गर्छ, उसले यसलाई न he गर्छ। तर ऊ अझै एक मनोरञ्जनात्मक / शेफ / व्यवसायी हो। मालिकहरूले उनीहरू के भित्र पस्दै थिए भन्ने कुरा जान्नुपर्दछ। यस अवस्थामा, कार्यक्रमको सुखद अन्त्य थिएन, रम्से रेस्टुरेन्टबाट टाढा गयो र विश्वले सोशल मिडिया मार्फत मालिक स्यामी र एमी बोजाग्लोलाई फेसबुक मार्फत आक्रमण गर्‍यो।
अद्यावधिक: वास्तविकता टेलिभिजनले कसरी काम गर्दछ भन्नेमा उत्कृष्ट कार्यक्रमको लागि यो अतुलनीय चार्ली ब्रूकर कार्यक्रम हेर्नुहोस्:
र एमी बूजाग्लोले जवाफ दिए (अब पढ्नुहोस् Buzzfeed)। यो राम्रो थिएन। वास्तवमा यो एकदम कुरूप हो।
त्योले भन्यो, यो अनावश्यक छैन। एमीको बेकरी कम्पनी एक राष्ट्रिय चेन हैन, यो स्कटस्डेल, एरिजोनामा संघर्षरत बिस्टरो हो। एमीको बेकरी कम्पनीमा हमला गर्ने व्यक्तिहरूले त्यहाँ खाएनन्, त्यहाँ खाने थिएनन, र यो कुरा टेलिभिजनमा एपिसोड नभएसम्म थाहा पनि थिएन।
डर-मोर्जिंग सुरू गरौं
एक सोशल मिडिया मल्दाउनको अर्को चरण, अवश्य पनि, सोशल मिडिया पंडितहरूले सबै आफ्नो ब्लगहरू खोल्न र ट्याप, ट्याप, ट्याप गर्दै कसरी उनीहरूले यस कम्पनीलाई शुद्ध मृत्युबाट बचाउने थिए र मालिकहरू बचाउको लागि कत्तिको भयावह थिए। तिनीहरू आफैंले सोशल मिडियामा गरे। निश्चित छ ... तिनीहरूले यो राम्रो तरिकाले गरेनन्। तर म तिनीहरूलाई दोष दिन सक्दिन। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं उनीहरूको जुत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईंको जीवनको कार्य राष्ट्रिय टेलिभिजनमा एक दुःस्वप्नको रूपमा चित्रण गरिएको थियो, र तपाईं रेडडिट, येल्प र फेसबुकमा ट्रोलको फौजको साथमा रहनुभयो भने तपाईंको कम्पनीको विगठन भयो।
म पनि रिसाएको हुन्थ्यो। र म पनि जवाफ दिनेछु।
त्यसो भए हामीले के सिकेका थियौं
रेस्टुरेन्टले राष्ट्रिय ध्यान खिच्न थाल्यो, फेसबुकमा k० के + अनुयायीहरू, र - म यो पुष्टि गर्न सक्दिन - तर म पक्का छु कि उनीहरू भोजन गर्ने कोठामा भरिएका छन्। तिनीहरूको वेबसाइट यति व्यस्त छ त्यो क्र्यास भएको छ। र सबै मान्छेहरू स्कट्स्डेलमा 'किचेन सपनाहरू भएको ठाउँमा' खानको लागि रिजर्भेसन गरिरहेछन् भन्ने कुरामा म निश्चित छु कि तिनीहरूमध्ये कोही घर जानेछन् र भन्नेछन् ... 'वाह, त्यो एकदम राम्रो थियो'!
र त्यसैले सोशल मिडिया मल्दाउनको आधा जीवन जान्छ। सामाजिक मिडिया पंडितहरूको चिच्याहट र चिच्याहटबाट टाढा, तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ कि एपिसोड हावामा जोर्नी बाहेक अरु केही थिएन। निश्चित, यो केहि मिनेट को लागी खराब गन्ध आयो, तर यो चाँडै नै ठीक हुनेछ।
सामाजिक मिडिया hype, विश्वास नगर्नुहोस्। हरेक कम्पनी पुनः प्राप्त गर्न सक्दछ। र मेरो भविष्यवाणी यो छ कि एमी बेकिंग कम्पनी एकदम राम्रो पुन: पल्ट हुनेछ।
टैग: amy बेकिंग कम्पनीरेस्टुरेन्ट उद्योगरेस्टुरेन्ट
मई 15, 2013 मा 11: 01 PM
इन्टरनेट स्क्यान्डलहरू सामान्यतया फ्ल्यास पेपरजस्तै हुन्छन् - तिनीहरू प्रज्वलित हुने बित्तिकै छिट्टै नष्ट हुन्छन्। तर तपाईले यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ भन्नेमा सबै कुरा हो। एमीको बेकिंग कम्पनीको आत्म-प्रेषित महाकाव्य असफल भयो जब उनीहरूले आफ्ना आलोचकहरूलाई आत्म-धार्मिक पवित्रता, स्कूलयार्ड ब्रागाडोसियो, लडाकु मुद्रा, र - सबैभन्दा खराब - कम-ब्रो व्यक्तिगत आक्रमणहरूका साथ जवाफ दिए।
Bouzaglos आफ्नो पक्षमा सार्वजनिक राय प्राप्त गर्ने मौका थियो, तर तिनीहरूले यसलाई उडाए। तिनीहरूले आफूलाई थोरै मात्र प्राप्त गर्न सक्थे र आफ्ना आलोचकहरूलाई अनुग्रह, नम्रता र आत्म-अपमानजनक हास्यको मिश्रणले जवाफ दिन सक्थे। बरु, तिनीहरूको अपोप्लेक्टिक, खराब-रचित पोष्टहरूले रकेट इन्जिनमा हाइपरगोलिक तरल पदार्थहरू मिसाउने जस्ता परिणामको ग्यारेन्टी दिन्छ।
यसको विपरित, त्यो युवा न्यूजकास्टरले गत महिना उत्तर डकोटा टिभी स्टेशनमा उसको प्रत्यक्ष-माइक एफ-बम पछ्याउँदै उसले पहिलो (र अन्तिम) पटक हावामा जाँदा उसको फायरिङलाई कसरी ह्यान्डल गर्यो हेर्नुहोस्। पछि, उसले आफूलाई बाहेक अरू कसैलाई दोष दिने प्रयास गरेन, उसलाई गोली हान्नुको लागि स्टेसनप्रति कुनै द्वेष थिएन, र उसले आफ्नो महाकाव्य असफलतालाई नम्रतापूर्वक स्वीकार गर्यो र यसको लागि आफैंमा हाँसे।
नतिजाको रूपमा, जनताले उहाँलाई एक जवान, मनपर्ने केटाको रूपमा हेरे जसले इमानदार फ्लब बनाए। उनको अन-एयर अपवित्रताले भन्दा उनको फायरिङबाट धेरै मानिसहरू रिसाए।
त्यो मान्छे रिबाउन्ड हुनेछ र राम्रो गर्नेछ।
तर एमीको बेकिंग कम्पनी? म यस बारे निश्चित छैन। उनीहरूले जिज्ञासा खोज्नेहरूबाट व्यवसायमा छोटो अपटिकको आनन्द लिन सक्नेछन्। ती मध्ये केही व्यक्तिहरूले मालिकहरूलाई टकराव वा बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्न पनि सक्छन्। तर यो शङ्का छ कि तिनीहरूले धेरै दोहोरिएको व्यापार देख्नेछन् यदि तिनीहरूको खाद्य उत्पादन सामान्य र अधिक मूल्यमा छ, र तिनीहरूले सेवा प्रदान गर्छन्।
तर तिनीहरूको भविष्यको सफलताको बिरूद्ध सबैभन्दा ठूलो सूचक यो हो कि उनीहरूले आलोचकहरू र कर्मचारीहरूप्रति देखाउने विषाक्त, निष्क्रिय व्यवहार सम्भवतः आपूर्तिकर्ताहरू, बैंकरहरू र वरपरका समुदायहरूसँगको तिनीहरूको व्यवहारमा फैलिन्छ - छोटकरीमा भन्ने हो भने, जो कोही र सबैजना जसलाई राख्नमा हात छ। व्यापार चलिरहेको छ।
मई 15, 2013 मा 11: 18 PM
मेरो बिन्दु बिल्कुल उनीहरूको व्यवहार माफी छैन। म मात्र तर्क गर्दैछु कि यसले तिनीहरूको व्यवसायमा दिगो प्रभाव पार्नेछ। मेरो भविष्यवाणी छ कि व्यापार अद्भुत हुनेछ ... केहि समय को लागी। -
मई 16, 2013 मा 10: 12 एएम
मलाई लाग्छ कि तपाईं दुबै सही हुनुहुन्छ, डगलस। व्यापार केही समयको लागि उठ्नेछ, तर फेसबुक लाइक र वेबसाइट हिटहरूले यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन व्यापारको लागि धेरै मतलब गर्दैन। के तिनीहरूले यसलाई पछि सडकमा सकारात्मक रूपमा घुमाउन सक्छन्? बिल्कुल। यदि यो वास्तविक हो भने, के तिनीहरूको हालको व्यवसाय समृद्ध हुनेछ? सम्भवतः प्रमुख रिब्रान्डिङ बिना।
अब, तिनीहरू दावी गर्दैछन् कि तिनीहरू ह्याक भएका थिए; त्यसोभए यदि यो मामला थियो, र तिनीहरू वास्तवमा धेरै दयालु होस्टहरू हुन्, यो तिनीहरूको लागि धेरै राम्रो हुन सक्छ।
मई 19, 2013 मा 7: 50 PM
व्यापार पटक्कै उठ्दैन । तिनीहरू अस्थायी रूपमा बन्द छन्।
तिनीहरूले खराब खाना वा धेरै ढिलो सेवा पाएको बेला गुनासो गर्ने ग्राहकहरूलाई मौखिक रूपमा दुर्व्यवहार गर्ने र बाहिर निकालेकोमा गत2वर्षदेखि Yelp मा भयानक समीक्षाहरू पाइरहेका छन्।
उनीहरूले घमण्डसाथ रामसेज शोलाई सम्पर्क गरे ताकि उनले 'विश्वलाई उनीहरूको खाना कत्तिको राम्रो छ भनेर बताउन सकून्।' मलाई लाग्छ कि उनीहरूले सोचेका थिए कि उसले उनीहरूलाई फ्यान गर्नेछ।
के तपाईंले एपिसोड हेर्नुभयो, कम्तिमा पहिलो पाँच मिनेट? यी दुई गरीब रेस्टुरेन्ट मालिकहरू होइनन्, तिनीहरू केवल शुद्ध र साधारण पागल हुन्।
मई 20, 2013 मा 5: 54 एएम
कुरा के हो, यो सबै पहिलो स्थानमा उडायो किनभने खाना र सेवा दुबै भयानक थियो। यो सामाजिक मिडिया बुशफायर होइन, यो एक कम्पनी हो जसले गुणस्तर उत्पादन प्रदान गर्दैन। उनीहरूले रामसेमा बोलाएको कुराहरूमा काम गर्नुको सट्टा उसले आलोचकहरूलाई उनीहरूको पछाडि हटाउन सकोस्। यो अति अहंकारी र हेरफेर दुवै थियो।
यो कुनै पनि सामाजिक मिडिया ट्रोल द्वारा सुरु गरिएको थिएन। यो मालिकहरूले सुरु गरेका थिए। मेरो भविष्यवाणी यो हो कि तपाईंको रिकभरीको भविष्यवाणी काम गर्दैन। 🙂
मई 20, 2013 मा 9: 13 एएम
अन्य केही टिप्पणीहरूले उल्लेख गरेझैं, यदि तपाईंले वास्तवमा एपिसोड हेर्नुभएको थियो भने, तपाईंले एमी र सैमी बोउजाग्लो परिस्थितिमा पीडित होइनन् भनेर चिन्नुहुनेछ। बरु, यो ग्राहकहरु र कर्मचारीहरु जो खराब व्यवहार गरिएको छ। उच्च मूल्य बिन्दुमा ताजा रूपमा बजारमा जमेको खाना सेवा गर्दै हुनुहुन्छ? खराब व्यापार। गुनासो गर्न वा खाना फिर्ता पठाउनको लागि ग्राहकहरूलाई मौखिक र शारीरिक दुवै रूपमा उत्पीडन गर्दै हुनुहुन्छ? खराब व्यापार। ग्राहकहरूलाई जानकारी नदिई कर्मचारी सुझावहरू लिने? खराब व्यापार। र गुनासोहरू र खराब समीक्षाहरूमा मालिकहरूको प्रतिक्रियाहरू आफैले बोल्छन्। उनीहरूले अन्य रेस्टुरेन्टबाट तस्बिरहरू चोरेर आफ्नो खानाको रूपमा आफ्नो फेसबुक र वेबसाइटमा पोस्ट गर्दै आएका छन्। त्यो स्पष्ट रूपमा बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी हो। उनीहरूले फोटोहरू चोरेका धेरै व्यवसायहरूले तस्बिरहरू हटाउन अनुरोध गर्दै आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्। उनीहरूले भाडामा लिएको पीआर फर्मले पनि एक अन्तर्वार्तामा भने कि व्यवसाय बचाउन योग्य छैन र उनीहरूलाई अहिले बन्द गरेर घाटा कम गर्नु राम्रो हुनेछ।
म तिनीहरूलाई यसबाट फर्कने बाटो देख्दिन। केएन एपिसोडबाट आएको खराब प्रचार केवल हिमशैलीको टुप्पो थियो। फेसबुक फलोअरहरूको उच्च संख्या, र त्यसपछि भोलिको पुन: खोल्ने कार्यक्रमको लागि बुक गरिएका आरक्षणहरूको संख्या मुख्यतया ती व्यक्तिहरू हुन् जसले ट्रेनको भत्काइ अझ गडबड हुने आशा गरिरहेका छन्। त्यहाँ पनि एक change.org पिटिशन चलिरहेको छ श्रम विभागलाई कम्पनीको कर्मचारी सुझावहरू जफत गर्नको लागि छानबिन गर्न। ध्यानले उनीहरूलाई विगतको उल्लङ्घनका लागि थप कुख्यात पनि पायो: एमी बोउजाग्लोलाई वर्षौं अघि पहिचान चोरीको दोषी ठहराइएको थियो जब उनले कसैको एसएसएनसँग क्रेडिटको लाइन खोल्ने प्रयास गरेकी थिइन्।
मेरो अपेक्षा यो हो कि तिनीहरू दिवालियापनको लागि फाइल गर्न बाध्य नभएसम्म तिनीहरू खुला रहनेछन्। तिनीहरू खराब प्रेसको कारण बन्द गर्न धेरै जिद्दी छन्, तर तिनीहरूले PR फर्मलाई के तिरिरहेका छन् र उनीहरूले इन्टरनेट ट्रोलहरू विरुद्ध दायर गरेका मुद्दाहरूको संख्याको बीचमा, तिनीहरूसँग भएको पैसा लामो समयसम्म चल्ने छैन।
मई 20, 2013 मा 9: 21 एएम
@facebook-769091638:disqus मैले भर्खरै पूरै एपिसोड हेरेँ... यो एउटा रेल भत्किएको जस्तो देखिन्छ (शोको "किचन नाइटमेर्स" विषयवस्तु अनुसार), तर सबैले "वास्तविकता" लिएको जस्तै तपाईं ब्यान्डवागनमा उफ्रदै हुनुहुन्छ। टिभी" एपिसोड पूर्ण प्रमाणको रूपमा। मेरो प्रतिक्रियाको मुख्य बिन्दु यो हो कि शो केवल उत्कृष्ट सम्पादनको प्रमाण हो। विडम्बना यो हो कि राम्सेले उनीहरूको बेक्ड सामानहरू (तिनीहरू बेकरी हुन्) र भान्साको सरसफाईको बारेमा धेरै कुरा गर्दै शो खोलेका थिए।
म न त उनीहरुको आनीबानीलाई मान्दछु, न त उनीहरुको प्रतिक्रिया । मेरो बिन्दु यो हो कि हामीसँग समीक्षा गर्नको लागि एक हप्ताको फिल्म छैन जुन यस अवस्थालाई बढाइचढाइ गर्नको लागि सम्पादन गरिएको र सँगै विभाजित गरिएको खण्डहरूमा नेतृत्व गर्‍यो। मलाई लाग्छ कि यो दुर्भाग्यपूर्ण छ कि यति धेरै मानिसहरू यी व्यक्तिहरूको मृत्युको लागि जयजयकार गर्दैछन्। यो एपिसोडमा यी मानिसहरूले अरूलाई गरेको व्यवहार भन्दा धेरै दुखद होइन, दुखद छ। मैले पोस्टमा भनेझैं, यदि मैले मेरो जीवन बचत एक मिलियन डलर भन्दा बढी पम्प गरेको थिएँ र मेरो कम्पनी आगोको बलमा तल झर्दै थियो भने, म पक्का छैन कि म पनि राम्रो प्रतिक्रिया दिनेछु।
मई 20, 2013 मा 11: 27 एएम
यो मैले पढेको पहिलो लेख हो जुन सहानुभूति हो, वा कम्तिमा
उद्देश्य, एमी बेकिंग सम्बन्धमा। एक imgurian (reddit कजिन), yelper र Amy's Baking को fb अनुयायीको रूपमा, म पक्कै भन्न चाहन्छु कि ती मनपर्छ।
सबै एक सामाजिक "लेनदेन" को भाग थिए। उदाहरणका लागि, मनोरञ्जनात्मक थप पागल रन्टहरू प्राप्त गर्ने आशामा म तपाईंको फेसबुकलाई "मन पराउँछु" र तपाईंले मेरो समाचार फिडमा घुसपैठ गर्नुहुनेछ। एकचोटि उनीहरूलाई "मन पर्यो" तिनीहरूले आफूले चाहेको कुरा भन्न सक्छन् र म तिनीहरूबाट बोर नभएसम्म सबै कानहरू (यस मामलामा आँखा) गर्नेछु। तिनीहरूले यो रेल भत्काउन र यसलाई सुनमा परिणत गर्न सक्थे, तर के तिनीहरूले? धेरै असम्भव। डरलाग्दो व्यवहारको माध्यमबाट, तिनीहरूले केही छोटो दिनमा 50k facebook लाईकहरू प्राप्त गरेका छन्। जब मैले तिनीहरूलाई मन पराएँ, तिनीहरू 5-10k दायरामा थिए। यसले उनीहरूलाई कमेडीको मुखको टुक्रा बन्ने अवसर दिएको छ (फैग्ने दुष्टताको - केवल एउटा लक्ष्य छान्नुहोस् र विलाप गर्नुहोस्) जुन सजिलै अनलाइन बिक्री बढाउन उत्प्रेरकमा परिणत हुन सक्छ। बेन र जेरीले मानिसहरूलाई सम्मान गर्न आइसक्रिम बनाउँछन्, अर्थात् स्टीफन कोलबर्टको अमेरिकन ड्रीम। तिनीहरूले उपहास वा मूर्ख नयाँ मेनु वस्तुहरूको डेसर्ट बनाउन र तस्विरहरू पोस्ट गर्न सक्थे। "एन कल्टर एक मीन टाको सलाद हो।" त्यस्ता सामग्रीहरूले मलाई हेरिरहन्छन्, तर तपाईंले हामीलाई मनोरञ्जन गर्न आवश्यक छ किनभने हामी चाँडै बिर्सन्छौं। विज्ञापनको समयमा म कुन शो हेर्दै छु भनेर प्राय: बिर्सन्छु। इन्टरनेट ट्रेन भत्काउने खाडल होइन, यो सीढी हो। 😉
मई 20, 2013 मा 11: 54 एएम
अपडेट: लाइकहरू: 96,231, र गन्ती, 10 नयाँ मैले यो अपडेट लेख्न सुरु गरेदेखि।
अक्टोबरबाट यो पोस्ट बाहेक सबै डरलाग्दो चीजहरू पर्खालबाट हटाइयो: "हामी तिनीहरूलाई 'क्यामेल टो माफिया' भन्न चाहन्छौं, कम्प्युटर स्क्रिन पछाडि लुकेको गुच्छा। वा YELP मा काम गर्नुहुन्छ
नयाँ सक्रिय कमेडिक इन्टरनेट खलनायकको मेरो सपना सुरु भएजस्तै अचानक समाप्त भएको जस्तो देखिन्छ। तिनीहरूलाई मन नपराउने र कर्नल म्याउमा फर्कने समय। म्याउ!